Mgbapụ na -ekpo ọkụ: kedu ihe ha bụ, njirimara na ka ha si eme | Meteorology netwọkụ
Ọkụ gbawara agbawa
Portillo nke German | 23/08/2021 09:58 | Ihe gbasara ihu igwe
Dị ka anyị maara, enwere ọtụtụ ihe meteorological na -apụta dị ka ihe ijuanya na anaghị eme ọtụtụ oge. Otu n'ime ọnọdụ ihu igwe na -adịghị ahụkebe bụ ọkụ blowouts. Ọdịiche a na -eme mgbe mmiri nke dara ada na -ekupụ mgbe ọ na -agafe ikuku kpọrọ nkụ ma ọ bụ oke ikuku na gburugburu ebe dịtụ ọkụ.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmụba na -ekpo ọkụ, kedu ihe bụ njiri mara ha na ịmata ihe.
1 Kedu ihe na -ekpo ọkụ
2 Kedu ihe na -ekpo ọkụ na -eme
3 Examplesfọdụ ihe atụ
4 Ihe mgbochi na Spain
Kedu ihe na -ekpo ọkụ
Mgbe mmiri ozuzo ga -amịpụ na -agafe akwa ikuku akọrọ na gburugburu ọkụ na -ekwukarị na mmiri ozuzo na -ebutekarị oke mmiri ozuzo. Mgbe mmiri a na -ada site na mbara igwe na -ekupụ, ọ na -eme ka ikuku na -agbada jụọ oyi ma tụọ ihe karịa ikuku gbara ya gburugburu. Ka ikuku na -ajụ oyi na -abawanye karịa ma e jiri ya tụnyere ikuku nke na -agagharị na gburugburu ebe dị ọkụ. N'ihi ya, ọ na -eji oke ọsọ agbachitere elu ya. N'ikpeazụ, mmiri ozuzo niile dị n'ime ikuku na -agbadata ga -apụ n'anya.
Ozugbo nke a mere, ikuku na -adị kpamkpam, ọ nweghịkwa ụdị uzuoku ọ bụla nwere ike ime n'oge ahụ. Ya mere, enwekwaghị ike iju ikuku nke na -agbadata ma mee usoro ọzọ. Ikuku na -aga n'ihu na -agbada ihu elu n'ihi ike ọ nwetara site na nzọ ụkwụ karịa ikuku gbara ya gburugburu. Ikuku kpọrọ nkụ na -agbada ma na -ewe iwe site na mkpakọ ikuku nke na -abawanye ka ọ na -agbada.
Ekwesịrị iburu n'uche na njupụta nke ikuku ga -amalite ibelata n'ihi mmụba nke okpomọkụ na -abawanye. Agbanyeghị, n'ihi na ikuku na -agbada, ọ nweela nnukwu ume nke na -ebuga ya n'elu. Site na mmụba nke okpomoku yana mbelata njupụta na -esi na ya apụta, enwere ike jiri nwayọ belata ọsọ nke ikuku na -agbadata ka ikuku nkụ ga -aga n'ihu na -agbada ka ọ na -ekpokwu ọkụ. Mmụba nke okpomọkụ a bụ n'ihi oke nghọta nke anyị kpọtụrụ aha na mbụ.
Kedu ihe na -ekpo ọkụ na -eme
N'ikpeazụ, ikuku nke na -agbadata na -erute n'elu na ume nke ọ na -eji na -aga n'elu ya n'akụkụ niile na -ebute ikuku siri ike. Ifufe a na -adịkarị n'ihu. Kedu ihe ọzọ, Nsonye oke ikuku na -ekpo oke ọkụ nke si n'elu na -eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị elu bilie n'ike n'ike. Site na mmụba nke okpomọkụ a, igirigi n'elu na -ebelata ngwa ngwa.
A ga -eburu n'uche na ọnụnọ ọnọdụ ikuku ndị a niile na -abụ ihe ndị dị mkpa ka enwere ike bute mgbawa ọkụ. Agbanyeghị, ọnọdụ ndị a niile adịchaghị ụkọ. Iji chọpụta mmụba ọkụ, a na -ewepụta profaịlụ okpomọkụ na iru mmiri nke rediosonde. A na -eji nke a ịhụ ihe gburugburu ebe obibi dị mma maka ịmịpụta ọkụ ọkụ.
Igwe redio a ọ na -enwe ike igosi njirimara gburugburu ebe obibi yana profaịlụ kwụ ọtọ nke okpomọkụ na iru mmiri na -enyere aka ịhụ mmegharị ikuku. Ahịrị akọrọ na ọkwa dị ala yana akwa oyi na -adịghị akwụghị ọtọ na ọkwa ọkara bụ ebe oke mmiri ozuzo ga -etolite ma emesịa mụọ ọkụ.
Mgbapụ ọkụ ndị a na -esokarị ifufe elu siri ike ma sie ike ịkọ. Ọ bụ ezie na a maara gburugburu ebe kachasị mma maka ụda a hụrụ ma ọ bụ buru amụma site n'ụdị ụdị ihu igwe dị iche iche.
Examplesfọdụ ihe atụ
Anyị ga -ahụ ihe atụ ụfọdụ nke mwụpụ ọkụ na -eme n'ụwa. Ụfọdụ ihe atụ nke oke iwe ọkụ ma ọ bụ mpụta ọkụ akọpụtara gburugburu ụwa gụnyere okpomọkụ dị na Antalya, Turkey, na Julaị 10, 1977, nke dị 66,3 Celsius C; Na Julaị 6, 1949, ọnọdụ okpomọkụ dị nso na Lisbon, Portugal, site na 37,8 ° C n'ime nkeji abụọ rịrị elu ruo 70 Celsius, na O doro anya na edekọtara oke okpomọkụ 86 ° C na Abadan, Iran, na June 1967.
Akụkọ akụkọ kwuru na e gburu ọtụtụ mmadụ ebe ahụ na okporo ụzọ korota na -egbu egbu. Akụkọ ndị a sitere na Portugal, Turkey na Iran abụghị nke gọọmentị. O yighị ka ọ bụ ozi ọ bụla ọzọ karịa nkwenye nke akụkọ akụkọ mbụ n'onwe ya, na nyocha nke nyocha ihu igwe na mpaghara n'oge ihe ebubo e mere egosighi ihe akaebe ọ bụla iji kwado akụkọ ndị a dị oke egwu.
Kimberley si South Africa gosipụtara ntiwapụ nke welitere ọnọdụ okpomọkụ site na 19,5 ° C ruo 43 Celsius C n'ime nkeji ise n'etiti 21: 00-21: 05 n'oge oke mmiri. Otu onye na -ahụ maka ihu igwe mpaghara kwuru na ya chere na ọnọdụ okpomọkụ arịala elu karịa 43 Celsius, mana temometa ya adịghị ngwa ngwa ịdebanye ebe kachasị elu. N'elekere 21:45 nke abalị, ọ̀tụ̀tụ̀ okpomọkụ gbadara ruo 19,5 Celsius.
Ihe mgbochi na Spain
Na obodo anyị enwerekwa ụfọdụ ikpe ọgbụgba ọkụ. Dị ka ọ na -adịkarị, a na -ejikọ ihe ndị a na oke ifufe na mmụba na mberede na okpomọkụ. Mmiri nke dị n'ikuku a na -agbadata ma na -ekucha tupu ya eruo ala. Ọ bụ n'oge a ka ikuku na -agbada na -ekpo ọkụ n'ihi mkpakọ nke ịdị arọ nke kọlụm ikuku dị n'elu ha kpatara. N'ihi nke a ikpo ọkụ nke ikuku na mberede na ibelata iru mmiri.
Ndị ọkachamara ihu igwe na -ekwu na enwere ike ịhụ igwe ojii ka ọ na -eto n'ike n'ike wee na -egosi nrụpụta vetikal siri ike. Ọ bụ ezie na ọ dị ka otu, ha bụ igwe ojii na -eto n'ike n'ike ka ọ nwee ike ịdị ka oke ifufe. Ọfụfụ na -ekpo ọkụ na -emekarị n'abalị ma ọ bụ n'isi ụtụtụ mgbe okpomọkụ dị n'elu dị ala karịa oyi akwa ozugbo n'elu ya.
N'ihi mmetụta mbibi ha, ahịrị ndị a nwere ike nwee mgbagwoju anya na oke ifufe ebe ọ na -ejikọkwa ha na oke ifufe. Agbanyeghị, enwere ike ịmata ya site na ụzọ mmebi ọ hapụrụ.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara mmụba ọkụ na njiri mara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ọkụ gbawara agbawa
Mmiri ozuzo na Greenland